Puntland..Burbur Dhaqaale Iyo Mid Siyaasadeed ! | Xaqiiqonews
Puntland..Burbur Dhaqaale Iyo Mid Siyaasadeed !
Ka dib 22 sano oo ka soo wareegtay markii la dhisay maamulka Puntland, madaxda iyo siyaasiyiinta Punland waxa ay wili raadinayaan “Sanbuus afar gees ah”.gobolkana waxaa ku socda dhig bax dhaqaale oo dhinac ah iyo dhiig bax siyaasadeed oo dhinac kale ah.
Waa arin iska cad in Puntland ay ku socoto burbur,isku dhicii siyaasadeed ee ugu dambeeyey gaar aahaan weerarkii golaha barlamaanka ayaa muujiyey kala qeybsanaanta qabaa’ilada.
Kooxda Dowladda islaamiga(Daacish) faraceeda Puntland iyo Alshabaabka Puntland ayaa muuqda in ay yihiin isbaheysi isdiidan kaasi oo heshiis ku ah la dagaalanka Puntland.
Intaasi Oo dhan Ka dib Maxey Sameeyeen Madaxda Puntland?
Markii Madaxweynaha Puntland uu aaday caleemo-saarkii Axmed Madoobee dadka qaar ayaa ku tilmaamay in qorshahaasi uu qeyb weyn ka noqday in ay buuxdhaafto kafadda miisaanka dambiyada ee Deni.
Dhabtii maanta waa maalinta “is-xisaabtinta” , inkastoo xalka ugu fiican ee la filano karo uu yahay in Puntland laga hergeliyo isbadal maamul oo dhameystiran, wili waxaa muuqda awood ay leeyihiin madaxdii Puntland ka dhigtay “fagaare dagaal’.
Xaquuqda burburinta Puntland waxa ay u dhowrsantahay Deni, Waxa ay ila tahay “Arinta socota” ayaa ku filan in aad wax ka badasho qaabkii aad u fikireysay, mana rabo in aan “Dambi la’aan” ka dhigo kooxda kale, laakin indhaheyga waxa aan ku arkaa “Puntland Gubaneysa”